VOT: GOSSIP GIRL မှာဘယ်သူ့ကိုတရားဝင်အဆိုးရွားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာလဲ။ - သတင်း
VOT: Gossip Girl မှာဘယ်သူ့ကိုတရားဝင်အဆိုးရွားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာလဲ။
ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်မှာသင်သည် Gossip Girl ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ အချိန်ကာလ၌ပထမဆုံးအကြိမ်ပြန်ကြည့်ခဲ့စဉ်ကမျှတသောဇာတ်ကောင်အနည်းငယ်ကိုသင်အမှန်တကယ်နှစ်သက်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ဂျက် Wills ၏ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း, ရောင်စုံဘောင်းဘီနှင့် ပုလဲ headbands ခေတ်ကာလအပြီး - ဇာတ်ကောင်တိုင်းသည်ဤခေတ်၏ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုပြည့်စုံစွာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအပေါ် အခြေခံ၍ လူများကိုသာကြည့်ရှုနေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် 2020 ခုနှစ်, ပြပွဲပထမ ဦး ဆုံးထုတ်လွှင့်ကတည်းက 13 နှစ်, ငါတို့အနည်းငယ်ဖြစ်ပိုပြီးယခင်ကထက်အရင်ပါပဲ။ Chuck legit သည်ဂျနီနီအားပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွင်မုဒိမ်းကျင့်ရန်ကြိုးစားသည်၊ အမှန်တကယ် Gossip Girl ဇာတ်ကောင်တိုင်းသည်ကြီးမားသောထုံးဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်လုံလောက်သောအလင်းရောင်ရရှိခဲ့သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့ဒီနယ်မြေနှင့်အတူကြွလာ။ ငါ Gossip မိန်းကလေးဇာတ်ကောင်များ၏ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ ပြဇာတ်၏ Netflix ၏ဖော်ပြချက်သည်တစ်ချိန်ကစာသားအရကြွယ်ဝသူဖြစ်ပြီး၊ ထပ်ခါတလဲလဲ Netflix မှတရားမျှတသော။ ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဟာလူကောင်းတွေဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့ ၁၃ နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တွေကသူတို့ဟာသူတို့ပဲလို့ထင်နေကြတယ် အရမ်းတင်ပါး နှင့်ကျိန်းသေ အရမ်းကောင်းတယ် ။ ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှဒါကမမှန်ဘူးဆိုတာကိုသင်သဘောပေါက်ထားတယ်။ ပြီးတော့ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းအက္ခရာတွေနဲ့ထိုင်ကြည့်လို့မရဘူး (* ချောင်းဆိုး *) Serena သင့်ကိုယ်ပိုင်မျက်တောင်များကိုဆွဲထုတ်ရန်မလိုဘဲ * ချောင်းဆိုး * ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်ကိုစိတ်မကောင်းပေမယ့်တကယ်ပဲနိမ့်သော့ခတ်နေသောစာလုံးများအားလုံး
အွန်လိုင်း adderall ကိုဝယ်ခြင်းငှါအကောင်းဆုံးနေရာ
သို့သော်ဤတွင်လူတိုင်း၏နှုတ်ခမ်းများပေါ်တွင်မေးခွန်းဖြစ်ပါသည် (ယခုသင်သေချာပေါက်မစဉ်းစားမနေခြင်းကြောင့်သင်၏ ဦး နှောက်ထဲ၌ဤစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုစိုက်ပြီးပြီ) ။ ထိုသူအပေါင်းတို့၏အကြွင်းမဲ့အာဏာအဆိုးဆုံးမဲနှင့်သရဖူဆောင်းဖို့အချိန်ပါပဲ။ သငျသညျပွုမီ, သော်လည်း, ဒီမှာငါတို့နှင့်အတူသည်းခံခဲ့ရတယ်သမျှသော shit တစ်သတိပေးချက် - ဇာတ်ကောင် '' အဆိုးဆုံးအရည်အသွေးတွေရဲ့သင့်ရဲ့အမှတ်တရများလန်းဆန်းရန်။
BuUuUttT ဖေဖေဖေဒူးဘွတ်ဖိနပ်ကိုချုပ်။ ဝတ်ဆင်လိုသည် !!!
Ugh, Little J. မင်းမင်းရဲ့ဇာတ်ကောင်အပြည့်အ ၀ အမုန်း သူမလုပ်သောကြောက်မက်ဖွယ်ဆိုးဝါးသောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုကြည့်ရှုရန်။ Gossip Girl မှာသူမပေါ်လာတဲ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးမှာ Jenny လုပ်ခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောကောင်းကျိုးကတော့အနည်းဆုံး DRAMA အရည်အသွေးကောင်းရှိလို့ပါ။ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ပေမယ့်သူမ ၀ တ်စားဆင်ယင်တာတွေ၊ shit ချုပ်ချုပ်တာကိုကြည့်ရတာအရမ်းပင်ပန်းပါတယ်။
Taylor Momsen က Gossip Girl ဖန်တီးသူတွေကိုသူမရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုတေလာရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ irl sex punk raccoon persona နဲ့အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းစရာအချက်တွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ Little J ကို Pretty Reckless အဖြစ်သို့ရာသီတစ်ခုအတွင်းမှာငါတို့သဘောတူညီချက်မရဘဲပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကြောင့်ပါပဲ။
Little D ၏ညီ L Little D (လျောက်ပတ်စွာအမည်ပေးထားသည် - Chuck သည်ဤဗြောင်ကျကျ zinger ကိုဘာကြောင့်မသုံးခဲ့သနည်း) သည်ထိုတွင်အဖြူရောင် Knight Simp ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ သူကသူ့ကိုယ်သူ Lonely Boy ဆိုတဲ့ဘွဲ့ပေးခဲ့တယ်။ သူမစာအုပ်တွေ၊ အရေးအခင်းတွေ၊ သူ့ကိုပြန်မချစ်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတွေကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောခဲ့တယ်။ ဒါ့အပြင်သူ LITERALLY cucked တယ်။ စာသားလိုပဲ။ Georgina ဖြင့်ဖြစ်သည်။ သတိရလား သူကလေးမွေးတုန်းက ပြီးတော့သူကဖခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Gossip Girl ကို run နိုင်ခဲ့တယ်။ ရယ်စရာအပြုအမူ။
ထို့အပြင်ဒန်သည် softboi အားလုံးကိုပြုမူခဲ့သော်လည်းကြွယ်ဝသောအရှေ့ပိုင်းခြမ်းရှိမိန်းကလေးများအတွက်အရသာရှိခဲ့ပြီးတချိန်လုံးငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ဒန်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ဟာဘရွတ်ကလင်အလယ်ပိုင်းကဒေါ်လာ ၁ သန်းတန်တဲ့ခေါင်မိုးပေါ်မှာနေထိုင်ပြီးပကတိရုပ်ရှင်ကြယ်တွေပါဝင်တဲ့ချိန်းတွေ့ခြင်းသမိုင်းရှိရင်မင်းရဲ့ ickle ဆင်းရဲတဲ့ကောင်မလေးလမ်းပေါ် urchin persona ကိုမယုံဘူး။ ငါသည်လည်းဤဇာတ်ကောင်များကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျယူပြီးသူတို့အမှန်တကယ်လူများကဲ့သို့သရုပ်ဆောင်နေသလား။ ဟုတ်တယ်။ ငါရပ်တန့်ဖို့စီစဉ်ပါသလား မဟုတ်ပါ။ လာမယ့်ပြိုင်ဘက်သို့။
Chuck (ခ) မြည်း
ပထမ ဦး ဆုံး ep အတွက်ဂျဲနီမုဒိမ်းကျင့်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အတော်လေးစာသားမကောင်းသောအဖြစ်ခဲ့သည်။ ပျော်စရာအတွက်လူတွေနဲ့စိတ်ကစားပြီးငါ့ရဲ့ဖေဖေကငါ့ကိုသိပ်ပြီးနာကျင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ် ငါတို့လုပ်ခဲ့တယ်။ အဆင်မပြေဘူး !!!
ရုံ HORRIBLE ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါသူမက (i.e တိုင်းမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်ငါ့ကိုပယ် piss ပါဘူး), ဒါပေမယ့်သူကလက်တွေ့ကျကျသဘောအရသူမ ... အဆိုးဆုံးအဖြစ်ဇာတ်ကောင်အဖြစ်အကောင်းဆုံးအသက်ခဲ့သူမြား၏တ ဦး တည်းရဲ့ငါသိ၏ ဒီမိန်းကလေးကသင်၏ကျောင်းတွင်ရှိပြီးသူမပြသသည့်အတိုင်းပြုမူခဲ့လျှင်သင်အမှန်တကယ်သူမ၏စိတ်စိတ်နှင့်အတူအကူအညီတောင်းအဖွဲ့အစည်းအချို့ကိုမျိုးမှသူမ၏ကျူးလွန်စဉ်းစားချင်ပါတယ်လိုပဲ။ Blair နှင့် Chuck တို့က Johnny Depp နှင့် Amber Heard တို့ဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့အားလုံးသည်ယခုသူတို့ကိုမုန်းသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏နို့ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပါ။
Serena ဗန်ဒါ Blandsen
နေပြည်တော်။ သူမမှာဆံပင်ကောင်းပြီးအမှန်တရားကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်မလေးဟာကျွန်မတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုခြောက်ရာသီလောက်ပဲဖမ်းစားနိုင်ခဲ့တယ်။ Serena ဟာတကယ်ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းစိတ်ရှုပ်စေသည်။ ဒါဟာချက်ချင်း၏ဇာတ်ကြောင်းဒါအံ့သြဖွယ်အဖြစ်သူမ၏ခြယ်သဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာပထမ ဦး ဆုံးစောင့်ကြည့်အပေါ်ချက်ချင်းသတိထားမိဖို့ခဲယဉ်းပေမယ့်သင် Serena ရဲ့ဇာတ်ကောင်ကိုပြုတ်သောအခါသင်အများကြီးမရကြဘူး။ ရိုင်းပါတီမိန်းကလေးပေမယ့်သူမ ... ရိုင်းမဟုတ်ဘူး, ဒါမှမဟုတ်ပါတီမိန်းကလေးတော့ဘူး? တကယ့်ကိုအေးဆေးအေးဆေးအေးဆေးအေးပေမယ့်လည်းအချစ်မရွေးအထီးဇာတ်ကောင်နဲ့ချစ်ဖို့လိုတယ် Serena သည် Lily Bass / Van Der Woodsen / Rhodes အတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင်သူမရဲ့ storylines ရုံ ... ခက်ခဲကြမ်းတမ်းဖြစ်ကြသည်။ အမြဲတမ်းသာမန်ယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်သူမနှင့်အတူသူမကိုယ်တိုင်လုပ်ရသည့်ခက်ခဲသောအခြေအနေမျိုးတွင်အမြဲတမ်းရှိသည်။ စပိန်တွင်လက်ထပ်ထိမ်းမြား, ယောက်ျားလေးရဲ့ပိရမစ်အစီအစဉ်အတွက်ကျရောက်, စီးရီးအများစုများအတွက် Gossip မိန်းကလေး၏ပကတိပိုင်ရှင်ရက်စွဲများ - Serena အပေါ်လာ။ ငါဝမ်းနည်းခြင်းရှိ၏၊ ဆင်းရဲသူ Serena! ကျွန်တော့်ဘဝဟာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေတယ်။ တစ်ချိန်ချိန်, သင်စဉ်းစားရမယ်, ဤအခြေအနေများအားလုံးအတွက်ဘုံပိုင်းခြေကဘာလဲ? မင်း ဒါဟာသင် Serena !!!
မျက်ခုံးယခုသင် Nate မကယ်တင်နိုင်ပါ
Nathaniel Nate Archibald သည်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံး၏သမိုင်းတွင်တည်ရှိခဲ့သောအ ၀ ါရောင်အမြင့်ဆုံးလူသားဖြစ်သည်။ ပြောင်းပြန် Midas၊ သူတို့ထိခဲ့သမျှကအသားရောင်ဖြစ်လာသည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတြိဂံတိုင်း၊ Gossip Girl ဖန်တီးသူများသည်ရာသီဥတု (၆) ခုရှိခဲ့သော်လည်းသူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအတုမခိုးနိုင်ခဲ့ပါ။ သူတို့သည်ကြိုးစား။ ကြိုးစားကြ၏။ သူသည်လိမ်လည်မှုနှင့်အတွင်းလူကုန်သွယ်ရေးသားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး၊ အလွန်ဆိုးဝါးသောဖေဖေကိစ္စများရှိခဲ့သည်၊ နည်းနည်းဆင်းရဲခဲ့သည်။ Nate ရေးတဲ့လူတွေဟာအချိန်တိုင်းမှာထိုင်ကြပြီးပျင်းစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကောင်လေးကထုတ်ယူနိုင်ဖို့ဘာလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ။ ဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး ဒါကြောင့်အဆုံးမှာတော့သူတို့ကအဲဒါကို fuck ဆိုတဲ့ပြောပြီးသူ့ကို New York မြို့တော်အဖြစ်ခန့်အပ်လိုက်တယ်။ ဘာလဲ
စစ်မှန်သောဤစာရင်းထဲတွင်တစ် ဦး တည်းသောဇာတ်ကောင်ကကျွန်ုပ်ကိုသူတို့ပေါ်လာသည့်မြင်ကွင်းများကိုကျော်ဖြတ်ရန်ကျွန်ုပ်အားတွန်းအားပေးလိမ့်မည်။ Vanessa သည်ဘယ်သောအခါမျှမကောင်းသောအရာမဟုတ်သော်လည်းသူမသည်လည်းကောင်းမွန်သောအရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမှာသူသည်ဒန်အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေအဖြစ်တာ ၀ န်ပေးခြင်းခံရပြီး ၀ န်တာအားကောင်းသောအကြောင်းအရာများအတွက်ပကတိအနက်တွင်းများအဖြစ်အလုပ်လုပ်သောလူနှစ်ယောက်အားချစ်ခြင်း၊ အရာအားလုံးကိုစုပ်ယူခြင်း၊ ဖျက်ပစ်ခြင်း၊ Vanessa သည် Serena ၏ဘရွတ်ကလင်ပုံစံဖြစ်သည်။ ဘရွတ်ကလင်းဘလန်းတွင်သူမ၏ဇာတ်ကောင်မရှိမှုအတွက်ထုလုပ်ရန်လက်ကောက်နှင့်လည်ဆွဲများလွန်း။ အထူးပေါင်းစပ်ထားသည်။
သွားပြီ။ လီလီနှင့်အတူ Messaging ရပ်တန့်။ သငျသညျတီးဝိုင်းတစ် ဦး အဖေဖြစ်ကြသည်။ သင်တို့အဘို့အသွားရန်အားလုံးပါပဲ။ သင်ကိုက်ညီတောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ အလေးအနက်ထားငါ မတတ်နိုင် ငါဘယ်လောက်ရှင်းပြပါ ဂရုမစိုက် Gossip မိန်းကလေးအတွက်မိခင်နှင့်ဖခင်များ၏ဆက်ဆံရေး storylines အကြောင်း။ သူတို့မှာတစ်ခုတည်းသောအသုံးပြုမှုကမင်္ဂလာပွဲဖြစ်စဉ်များကိုလှပသောဝတ်စုံများနှင့်ဝတ်စုံများကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဒါပါပဲ။ ပြီးတော့ရုဖုကမိဘပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေထဲမှာတစ်ခုအပါအ ၀ င်ပါ။ အမြဲတမ်းပတ် ၀ န်းကျင်အမြဲတမ်းလိုင်လီ (သူ့အတွက်အလွန်တော်တဲ့သူ) အမြဲတမ်းဝိုင်း ၀ န်းအကြောင်းမလိုအပ်သောအကြောင်းပြချက်တွေကိုအမြဲတမ်းပြောတတ်သည်။ Shut up Eleven မှ Stranger အရာများမှငိုခြင်း၊ ဂစ်တာတီးခြင်း၊
အိုကေ, သူမတစ်ရာသီအတွက်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ Serena ရဲ့အမှားတွေနှင့်နောက်ဆက်တွဲသို့ကျဆင်းလာနယူးယောက် NYC ၏ storyline များအတွက်အမှန်တကယ်ကောင်းသောအထွတ်အထိပ်: Georgina Sparks ယုတ်မိန်းကလေးလူ့ဇာတိဖြစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင်သူတို့သည်သူမ၏အားမွေးဖွားသောခရစ်ယာန်ဖြစ်လာသည်။ ထို့နောက်တဖန်ဆိုလိုသည်၊ ထို့နောက်သူမ Gossip Girl ကိုလွှဲပြောင်းယူခဲ့သည်၊ ထို့နောက်သူမ၌ကလေးမွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်шантажနှင့်ရုရှားလူမျိုးများနှင့်ပတ်သက်သည်။ အရာအားလုံးနည်းနည်းဖြစ်ခဲ့သည် ကြာရှည် အဆုံးအားဖြင့်ငါ Kohl eyeliner တော့ဘူးမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာလည်ချောင်းနာ ​​gal ကောင်အဝတ်ကိုမြင်လျှင်ထံမှမည်သည့်ဝမ်းမြောက်သောစိတ်မရခဲ့ပေ။ သငျသညျသူမ ... သူမ၏မီးပွားဆုံးရှုံးခဲ့လို့ပြောနိုင်ပါတယ်
လီလီဗန် Der Woodsen
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးချစ်ခြင်းမေတ္တာပေမယ့်သူမကျွန်တော်တို့ကိုငါအချိန်တိုင်းကျော်သွားဖို့ရှိသည်သော 80s flashback ဇာတ်လမ်းတွဲမှတဆင့်ထိုင်စေဘာလို့လဲဆိုတော့တစ် ဦး ဖော်ပြချက်ထိုက်တန်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ယောက်ျားအတွက်အထူးသကြောက်မက်ဘွယ်သောအရသာရှိပါတယ်။
အဲရစ်ကိုဘာမှမပြောပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူနဲ့ဂျဲနီတို့ဟာကျွန်မအကြိုက်အတွက်အမြဲရန်ဖြစ်နေကြတယ်။ သူ့ရဲ့ချစ်သူရည်းစားတွေနဲ့အတူလိုက်ပြီး Little J ကိုသူတို့ရဲ့မကောင်းဆိုးဆိုးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဒူးမြင့်။
အဘယ်ကြောင့်လော်ရာ 365 dni ၌သေခဲ့တာလဲ
ဒီ dickhead! ငါဘလဲနှင့်ပတ်သက်။ ငါ၏အတရားမျှတတဲ့ shit ပြောခဲ့တယ်ငါသိပေမယ့်သူကတစ် ဦး မင်းသားရဲ့အဝတ်ထဲမှာ sneaky နည်းနည်းမြွေကြီးနှင့်ငါသည်သူ၏သဘောထားကိုတန်ဖိုးထားကြဘူး။ ပုံရဲ့အောက်ဆုံး။ ယောက်ျားလေးသူ့ကိုယူသွားပါ။
ပြောစရာဘာမှမရှိဘူး ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်သူမကိုမဲထဲ၌ထည့်သွင်းခြင်းပင်သူမသည်ကြီးကျယ်ခမ်းနားကြောင်းလူတိုင်းကိုသတိပေးလို။ သူမ၏အတင်းအဖျင်းမိန်းကလေးကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်မင်္ဂလာညကုန်ဆုံးစေခြင်းဖြစ်သည်။
သင်ယခုသင်အလိုရှိသည့် XOXO ကို vot လုပ်ပါ။ GOSSIP GORL